हाम्रो घटाइएको फोन बिल लागत - Konnekt
कम भयो फोन बिल लागत
परिवार र साथीहरूलाई असीमित कलहरूको साथ पैसा बचत गर्नुहोस्, विश्वभर।
हामीले नियमित फोन बिलहरू प्रति महिना $ १२० भन्दा बढी देख्यौं। प्रायः कलहरूको लागि तपाईको कम लागतको भिडियो फोन प्रयोग गरेर, तपाईले आफ्नो सम्पर्कको मोबाईल, घरेलु र विदेशी फोनहरूमा नियमित टेलिफोन कलहरूको आवश्यकतालाई हटाउनुहुन्छ। तपाईको नियमित फोन बिल धेरै कम गर्न सकिन्छ - सायद शून्यमा।
प्लस तपाई आफ्नो परिवार र साथीहरु को साथ आमने सामने कलबाट फाइदा।
तपाईं असीमित भ्वाइस कल गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि "ल्याण्डलाइन" फोन आफ्नै देशमा, र लगभग कुनै पनि ल्यान्डलाईन विदेशमा।
Konnekt तपाइँको इन्टर्नेट कलिंग सदस्यता पूर्ण रूपमा प्रबन्ध गर्दछ।
तपाईं आफ्नो सम्पर्कहरू जहिले-जहिले तपाईं चाहानुहुन्छ, जतिसुकै मनपर्दो, कुनै पनि समयमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै बिल आश्चर्य छैन!
परिवार र साथीहरूले तपाईंलाई उनीहरूको कलमा पनि बचत गर्न सक्दछन्
तपाईंको साथी र परिवारले उनीहरूको नियमित टेलिफोन र मोबाइल फोन बिलहरू पनि कम गर्न सक्दछन्। स्काइप प्रयोग गरेर तपाईंको भिडियोफोन कल गरेर (उनीहरूको मोबाइल, आईप्याड, ट्याबलेट, कम्प्युटर वा अन्य भिडीफोनबाट) साथै तपाईंको अनुहार हेर्न र तपाईंको मुस्कान साझा गर्न विकल्प भएको कारण तिनीहरू नियमित फोन कलको लागतबाट बच्न सक्दछन्। यो तपाईंको कलरहरूको लागि उत्कृष्ट हो जो विदेश, अन्तरराज्यीय, छुट्टीमा टाढा, वा प्राय: तिनीहरूको मोबाइल फोनहरूमा हुन्छन्।
स्काइप तपाईंको परिवार र साथीहरूको लागि तपाईंको भिडियोफोन कल गर्न नि: शुल्क छ। यसले उनीहरूको इन्टरनेट डेटाको एक सानो प्रयोग गर्दछ। Konnekt तपाईंको साथीहरू र परिवारलाई स्काइपमा सुरू गर्न मद्दतको लागि सल्लाहहरू छन् र जब उनीहरूले तपाईंसँग कुरा गर्छन् र तपाईंसँग कुरा गर्छन् तब उत्तम गुण प्राप्त गर्दछन्। Konnekt भिडियोफोन प्रस्तावहरू:
मोबाइल फोन, ट्याब्लेट र कम्प्युटरहरूमा असीमित फेस टु फेस फेस, संसारभरि
घरेलु ल्यान्डलाइन टेलिफोन र विदेशमा लगभग कुनै पनि ल्यान्डलाइनमा असीमित कलहरू
तपाईले चाहानु भएको जति नै कुरा गर्नुहोस्, कुनै पनि समयमा तपाईले चाहानु भएको जस्तो
साथीहरू र परिवारले पनि बचत गर्दछ, प्रत्येक पटक उनीहरू तपाईंको भिडियोफोन कल गर्दछन्
यसले कसरी वरिष्ठ र प्राविधिक ज्ञानका मानिसहरूलाई सहयोग गर्दछ?
यो Konnekt भिडियोफोनले तपाईंलाई परिवार र साथीहरूसँग FACE-TO-FACE कुरा गर्न मद्दत गर्दछ। आईप्याड वा टेलिफोन भन्दा यो प्रयोग गर्न सजिलो छ। यसले तपाईंको नियमित फोन बिल कम गर्दछ, र तपाईंलाई बोलाउनेहरूको लागि पैसा बचत गर्दछ। अज्ञात कलरहरू ब्लक गरिएका छन्। मनपराउनेहरूले तपाईंको फोटोहरू देखाउन सक्दछन्, तपाईंले केहि नगरीकन। हामी सबै सेट अप गर्छौं र पूर्ण समर्थन प्रदान गर्दछौं। हेर्नुहोस् वरिष्ठ आवेदन।